भ्रष्टाचारीले निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने सांसदहरूको माग ! - Purbeli News
भ्रष्टाचारीले निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने सांसदहरूको माग !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०३, २०७४ समय: ६:५९:००
काठमाडौं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेका हुन् ।
संशोधनमाथिको प्रस्तावमा सांसद मीना पुनले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी छिन् । दफा ४ माथि संशोधन दर्ता गराउँदै सांसदहरूले चैतमा निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसद रामेश्वर फुँयालले ४ मंसिरका लागि नियमित मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । अाजकाे नया पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।